[တရားဝင်] Mac ကိုအန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို: Android ပေါ်မှာအားဖျက်သိမ်းပြီး / ပျောက်ဆုံးသွားသောမှာ Data Recover
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - Mac ကိုအန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို
ကမ္ဘာ့ 1st, Mac Android စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဖ်ဝဲ။
တိုက်ရိုက်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်ဖို့က Android devices တွေကို scan ။
အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, အသံ, ဗီဒီယို, စာရွက်စာတမ်းများ, etc Recover
6000+ ကို Android Device များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
App ကို Download လုပ် ဝယ် Desktop ကိုဗားရှင်း
Windows အတွက်ကိုဝယ် Mac အတွက်ယ်ယူရန်
အခမဲ့ဒါဟာကြိုးစားပါ အခမဲ့ဒါဟာကြိုးစားပါ App ကိုဒေါင်းလုပ်
ဆုံးရှုံးသွားသောဒေတာကိုဆုံးရှုံးသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့အများကြီးဘုံအခြေအနေတွေကနေ recover လို့ရပါတယ်။
ROM ကို Flash
စက်ရုံအပြီးတွင် data တွေကို restore ဆုံးရှုံးခဲ့ရ
OS ကို update ကိုမှမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဒေတာ
လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ် ROM ကိုတောက်ပပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးဒေတာများ
အခမဲ့အဘို့အ Check & Preview ကို
သငျသညျပြန်လည်နာလန်ထူရှေ့တော်၌ထိုစကင်ရလဒ်အားလုံးကိုဒေတာ preview နဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကို Mac က Android ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသငျသညျအခမဲ့ထိုသို့ပြုမှခွင့်ပြုပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောဖိုင်တွေကို recover Are
ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသင်ဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရအဆက်အသွယ်, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဂီတ, ဗွီဒီယိုနှင့်ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများ recover ပေးနိုင်ပါတယ်။
Mac အတွက်ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေးသင်စကင်ရလဒ်အတွက်စစ်ဆေးနေအားဖြင့်သင်တို့ကိုလိုခငျြဆိုကို item recover လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပံ့ပိုးမှု 6000+ ကို Android မော်ဒယ်များ
ဤသည်ကို Mac က Android ဒေတာဆယ်တင်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုစတာတွေက Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei ကနေ 6000 ကျော် Android ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်
အမြစ်တွယ် & Unrooted Android ဖုန်းများအတွက်
သငျသညျအမြစ်တွယ်ခြင်းနှင့် unrooted နှစ်ဦးစလုံးသည် Android device များအတွက် Mac အတွက်ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေးကိုသုံးနိုင်သည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြီးနောက်, အမြစ်တွယ် device ကိုနေတုန်းပဲအမြစ်တွယ်ပါလိမ့်မည်, နှင့် unrooted တဦးတည်းလည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အန်းဒရွိုက်ပေါ်တွင် SD ကဒ်သကဲ့သို့, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကဒ်စာဖတ်သူနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်ဤ Mac အတွက် Android ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသုံးနိုင်သည်။ အလုပ်နှစ်ဦးစလုံး။
100% ကို Safe Gaurantee
ဤသည်ကို Mac က Android ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသာဖတ် Android ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ, အန္တရာယ်-အခမဲ့ ..
Mac အတွက်ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေးသာ3ကလေးခြေလှမ်းများ, ရှိသမျှမှာမေးလျှင်အဘယ်သူမျှမကကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုကြာ ..
ဒီ Mac အတွက် Android ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးအသုံးပြုသူများသည်အနာဂတ်အတွက်အခမဲ့အဆင့်မြှင့်ခံစားနိုင်။
မှစ. ဒေတာများပြန်လည်ရယူ ...
ပျောက် data တွေကို recover ရန်သင့် device ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
သင်သည်သင်၏အကောင့်များနှင့် files တွေကို access လုပ်နိုင်မှသာလျှင်
အကောင်းဆုံး Data Recovery Software များ
Ammar Syed အားဖြင့်
အဆင်ပြေတယ် !!!!!!!!!!!!!!! =)
5.1.1 ငါ့ S6 ပေါ်တွင်အန်းဒရွိုက်အဆင့်မြှင့်လုပ်ခဲ့တယ်နှင့်ငါ့အဆက်အသွယ်များ (ဥစ္စာလိမ့်မည်ကဲ့သို့သော) ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ (ကျနော်ပထမဦးဆုံးအကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို root ခဲ့ပေမယ့်) ဒေါက်တာ Fone အပြည့်အဝစာရင်းရပြန်လေ၏။ ဒါဟာ data တွေကိုဖြည်ဖို့အခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကြီးမားသောမြည်းချွေတာရေးအဘို့အဆပ်ဖို့တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အန်းဒရွိုက်ဆီကနေအားဖျက်သိမ်းပြီးမက်ဆေ့ခ်ျများ Recover ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Android ဖုန်းများအတွက်ထံမှအားဖျက်သိမ်းပြီးဆက်သွယ်ရန် Recover ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Android ဖုန်းများအတွက်အပေါ် Deleted ဓါတ်ပုံများ Recover ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Samsung က Cell Phone ထဲကနေဖျက်ပစ်မှာ Data Recover ရန်လွယ်ကူ Way ကို?
Samsung ရဲ့ Galaxy S6 ကနေအားဖျက်သိမ်းပြီးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ Recover ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Samsung ရဲ့ Galaxy S3 ကို [ွေဖရှငျးွ] တွင် Turn ကြမည်မဟုတ်
Broken Android ဖုန်းများအတွက်ကနေစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ Recover ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အန်းဒရွိုက် Recycle Bin ကို - Android ပေါ်မှာပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို Restore လုပ်နည်း